Adeegga Shiinaha ee Qiimaha lagu daray iyo wakiilka | Sunson
Soo gal / diiwaangelin
soo qaado & xirmo fulin
Adeeg qiimo leh
Adeegga maraakiibta adduunka oo dhan
Adeeg Xawaare ah
Ku calaamadee Naftaada Adeegyadeena Qiimaha-Dheer!
1. Ku darista suuq geynta si aad uga farxiso oo aad u haysato macaamiishaada.
2. Ku wareejinta alaabadaada sanduuqyada habaysan, ee qaabka aad doorbidayso.
3. Qalabaynta iyo isku-ururintu waxay xoojineysaa silsiladdaada waxayna fududeyneysaa habka qaybinta.
4. Lableling waa hawl dhib badan laakiin hawl muhiim ah markaa waanu kula wareegeynaa, waxaanna u dhigeynaa sumado si ku habboon si loo hubiyo muuqaalka alaabtaada.
Adeeg Bixinta Qalabka
Suuqan socda ee xawliga ku socda, halkaasoo meertada nolosha badeecaddu ay soo gaabinayso, macaamiishana ay leeyihiin noocyo kala duwan oo ay kala doortaan, waqti-u-suuq-aad u muhiim ah oo go'aamin doona guusha shirkadda.
Adeegyada silsiladda 'Sunsonexpress Supply Chain Services' (SCS) waxay siisaa adeegyo silsilad-ilaa-dhamaadka sahay silsilad oo ay siiso OEM (Soosaarayaasha Qalabka Asalka ah), ODM (Soosaarayaasha Naqshadda Asalka ah), EMS (Adeeg bixiyaasha Soo saarista Elektaroonigga ah) iyo soosaarayaasha qalabka elektaroonigga ah, iyaga oo awood u siinaya inay sarre u qaadaan silsiladahooda sahayda. .
Maaddaama aan nahay qaybiyaha adduunka, kaararkayaga ballaadhan waxay macaamiisha u fidiyaan waayo-aragnimo ah "hal-joogsasho-dukaan" ah oo loogu talagalay naqshadayntooda iyo baahidooda silsiladda. Khibrada iyo aaladaha ay adeegsadaan Kooxdayada Bixinta Qalabka waxay kuu ogolaaneysaa inaad yareyso wadarta guud ee qarashka wax soo iibsiga, inaad sare u qaado raasumaalkaaga shaqada hadana aad ugu raaxeysato dabacsanaanta helitaanka maadada sidaa darteed, aad u badineyso saamigaaga suuqa iyo faa iidadaada.
Bixinta iyo iibinta adeegga wakiilka
Adeegga wakaaladda lacag bixinta
Waxaan ku siin karnaa adeegga lacag la'aanta ah ee warshadda.
1688.com/Taobao.com/jd.com adeegga wakaaladda wax iibsiga
Waxaan la xiriirnaa iibiyaha oo aan kula xaajoonaa iibka adiga oo matalaya adiga
Taobao.com iyo degellada kale ee Shiinaha ma aqbalaan PayPal! Waxaan kuu oggolaaneynaa inaad ku soo dirto lacag bixinta Paypal ka dibna waxaan siin doonaa alaab-qeybiyaha iyadoo la adeegsanayo bixiyeyaasha lacag-bixinta Shiinaha! Kuu siinaya difaac weyn markaad wax ka iibsaneyso alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha!
Anagoo adeegsanayna khibradeena ganacsi ee taobao sanado badan, waxaan kugula talineynaa ku saabsan sax ahaanshaha iibiyeyaasha iyo talooyinka kale ee Taobao.com…
Waxaan ku siin karnaa iibsiga, wakiilka, kormeerka, maraakiibta caalamiga ah ee badeecada iyo adeegga masduulaaga ah ee tayada sare kuu leh, Adeeg kasta oo dheeri ah oo laguugu daro adiga haddii aad u baahato.
Cinwaanka ： C102 No.4 xiaolong wadada tongsheng bulshada dalang wadada longhua degmada shenzhen city guangdong